‘XENOPHOBIA’: ONYEAMA ZỌHIERE ỤKWỤ – UDEJI, ONOWU NA SAỤT AFRỊKA – hoo!haa!!
IHEDIOHA: PDP KA GA - EME NGAGHARỊ IWE ECHI N'ABỤJA
‘XENOPHOBIA’: ONYEAMA ZỌHIERE ỤKWỤ – UDEJI, ONOWU NA SAỤT AFRỊKA
Johanesbọg, Saụt Afrịka: Ezeali Ndubueze Jonas Udeji, Onowu Ndigbo, Saụt Afrịka ma bụrụkwa Onye nhiwe, Ohaneze Ndigbo, Saụt Afrịka ekwuola na Mịnịsta Naịjiriya na-ahụ maka okwu mba ọzọ, Mazị Jiofrị Onyeama zọhiere ụkwụ dị mwute oge ọ bịara njem na mba Saụt Afrịka n’ọnwa Maachị nke afọ 2017.
Udeji, onye bụkwa nna òtù Nigerian Union South Africa, ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ anyị okwu ụnyahụ n’obi ya n’Elandspark, Johanesbọg gbarụrụ ihu n’ụzọ n’adabaghị Onyeama gbasoro na njem ọ bịara na mba ahụ ka a wakpochara ndị isi ojii si mba ọzọ, ọ kacha ndị Naịjirịa n’afọ 2017.
“Site n’ihe a kpara na mbụ ma site n’usoro ziri ezi a na-agbaso na mba ụwa, ndị nnọchiteanya ndị Naịjirịa bi na Saụt Afrịka na-eche ka ha na ya nwee ọgbakọ tupu ya na ndị nnọchiteanya mba Saụt Afrịka enwee Ọgbakọ.
” Ọ dịzị mwute na Onyeama bịara ịhụ anyi oge ya na Mịnịsta Naijiria na-ahụ maka okwu ala anyị, Abdurahamn Dambazzau, gara nwechaa ọgbakọ ha na Gọọmenti mba Saụt Afrịka.
Udeji, onye bụkwa onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị ANC pụtara ìhè, kwuru na ya gwara Onyeama na okwu ọ gwara anyị na mwakpo ndị be anyị ga-akwụsị ka ọ bịachara bụ asị
“A gwara Onyeama na ihe ọ bịara bụ ịkọrọ anyị ihe Gọọmenti mba Saụt Afrịka kọọrọ ya, ya na ka anyị na ya see foto.
“Ọ bụrụ na ọ bịara Saụt Afrịka ilebanye anya na nsogbu anyị, gịnị mere na o bụghị ụzọ bịa gee anyị ntị were mara ihe ọ ga-agwa Gọọmenti mba Saụt Afrịka?”
Chetakwa na ka ya na Mịnịsta okwu mba ọzọ nke Saụt Afrịka, Maite Nkoana-Mashabane nwechara ọgbakọ, na Mịnịstrị Naịjiriya na – ahụ maka okwu mba ọzọ kwuru na mwakpo ndị Naịjirịa ga-abịa na njedebe.
Nke ahụ bụ maka mkpebi Gọọmenti mba abụọ ahụ iguzobe atụmatụ mgba ama a kpọrọ Early Warning Unit (EWU) iji kwụsị ya bụ nsogbu.
Usoro EWU bụ nke ndị nnọchiteanya mba abụọ ahụ maka ịchịkọta ozi banyere ọgbaghara tupu ọ dapụta ma zigakwa ozi ndị ahụ na kọmishọna jikọtara mba abụọ ahụ were ruo ndị isiala mba abụọ aka.
Ọ dị mwute na afọ abụọ agaala mana eguzobeghi ya bụ usoro EWU.
Previous Post: IHE MERE OBAMA NA CLINTON JI BỤRỤ NDỊ AKA EKPE
Next Post: XENOPHOBIA:MPAKO NDIGBO BUTERE YA- JO IGBOKWE